Maxay tahay sababta Ethiopia oo bad iyo xeeb toona lahayn usamaysanayso ciidan badeed | Somaliland Mirror
Home WARARKA Maxay tahay sababta Ethiopia oo bad iyo xeeb toona lahayn usamaysanayso ciidan badeed
Maxay tahay sababta Ethiopia oo bad iyo xeeb toona lahayn usamaysanayso ciidan badeed
adminDec 11, 2018WARARKA0
Markii ay Eritrea xornimada qaadatay sanadkii 1993-kii, Itoobiya waxay noqotay dal aanan lahayn xeeb iyo bad toona, waxayna qaadday tallaabadii la filan karay oo ahayd in la kala diro ciidammadii badda.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan taleefishinka dalkaasi ka yiri “Waxaan dhisaynaa ciidammo xoog badan oo badeed, kuwaas oo ugu xoog badan Afrika”.Wakaaladda wararka ee Fana ayaa Ra’isulwasaare Abiy kasoo xigatay in uu yiri in ciidammada ay la jaanqaadayaan waxyaabaha kasoo kordhay adduunka, islamarkaasna sameeyaan isbadalada loo baahanyahay.
Waxaa jira khad tareen oo isku xidha labada dal, kaas oo dhan 759 km, kaas oo sahlay in badeecooyinka iskaga kala gooshaan labada dhinac.
Waxaan ka cabsanaynaa in Jabuuti xitaa ay go’aan ku yeelan weydo waxa ka dhacaya gudaha dalkeeda, oo lagala wareego awoodda, tanina waa halis soo foodsaartay Itoobiya” ayuu yiri Roba.
Maraakiibtaan ayaa waxa ay baroosinka dhigtaan Jabuuti, iyaga oo u kala goosha qaaradaha adduunka.
In ciidammo meel eber ah laga soo dhiso, gaar ahaan kuwa badda waa shaqo aad u culus, una baahan dhaqaale baddan.
Itoobiya waxa ay heshiisyo la saxiixatay Suudaan iyo waliba Somaliland, halkaas oo dekada Berbera ay Itoobiya ku leedahay 19% saamiga.
Mr Abiy waxa uu sidoo kale ka sanqadhiyay in uu wadahadal la furayo dowladda Eritrea oo ay muddo dheer dagaashanaayeen, isaga oo sheegay in xitaa uu xidhiidh dhiig ka dhaxeeyo.
Balse si kasta oo uu u hagaago xidhiidhka labada dal, ma muuqato saansaan ah in ay soo dhowdahay in Itoobiya ay dekada Asmara ugu tiirsanaan karto sidii hore oo kale.
Timothy Walker oo ka tirsan mac-hadka ISS ayaa qaba in Itoobiya ay tobonaan sano ku qaadan karto in ay dhisato ciidammo badeed, balse wuxuu qirey in ay samayn karaan laamo yaryar oo xagga badda ah..
Previous PostRaysal Wasaaraha Itoobiya Iyo Madaxweynaha Eritrea Oo Ku Waajahan Magaalada Muqdisho Iyo Ujeedka Socdaalkoodu Daranyahay. Next PostSomalia sink into fresh political problems after a motion to impeach President Farmajo